Global Voices teny Malagasy » Mihetsika Amin’ny Fanakanana Ny Tor I Belarosia Hiadiana Amin’ny Fanafenana Anarana An-tserasera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Desambra 2016 5:03 GMT 1	 · Mpanoratra Jack Margolin Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Belarosia, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Tamin'ny faran'ny volana Novambra, maro ireo mpisera aterineto Belarosiana no nanomboka nitaraina  tamin'ny mpanome tolotra aterineto mikasika ny fanakanana ny Tor Tambajotra mpanafina anarana.
Fotoana fohy taorian'izay, tamin'ny 6 Desambra, namoaka fanambarana ofisialy  ny Minisiteran'ny Serasera ao Belarosia manazava fa nosakanana ny tambajotra mba hamerana ny fizarana ny fitaovana tsy ara-dalàna ao amin'ny aterineto, araka ny voalazan'ny lalàna vaovao lany tamin'ny Febroary 2015.
Manafina ny anaran'ny mpifamoivoy ao amin'ny aterineto sy mamela ireo mpisera tsy handalo ny fanaraha-mason'ny tambajotra ny tambajotra Tor  izay norafetin'ny US Naval Research Laboratory (Laboratoara Fikarohan'ny Tafika An-dranomasina Amerikana ) tany am-piandohan'ny taona 2000, ary ankehitriny tantanan'ny Tetikasa fikambanana tsy mitady tombontsoa Tor. Voaafin-tsoratra ny fifamoivoizana mba hanafenana ny mari-panondroan'ny mpisera, ary mandalo amin'ny alàlan'ny lohamilina tantanan'ny mpiasa an-tsitrapo amin'ny toerana maro alohan'ny ahatongavany any amin'ny toerana alehany .
Nanomboka tamin'ny Febroary 2015 i Belarosia no nikendry ny Tor, rehefa nametraka ny fototry ny fandraràna an'ireo tolotra tsy mitonona anarana  ny didim-panjakana  navoakan'ny Minisiteran'ny Serasera. Tafiditra tao anatin'ny didim-panjakana ny Tor , na dia nisalasala aza ireo manam-pahaizana tamin'ny fahaizan'ny fanjakana Belarosiana hanakana ny fampiasana ny tambajotra.
Namariparitra ny olana tao amin'ny antsafa niarahana tamin'ny tranonkalam-baovao Belarosiana 42.TUT.BY tamin'ny taona 2015 i Mikhail Yakushev  filoha lefitry ny ICANN mpamatsy anaran-tsehatra iraisam-pirenena:
Manamafy ny ezaka hanenjehana ny Tor ankehitriny ny Minisiteran'ny Serasera na dia eo aza ny fahasarotan'ny asa mbola miandry . Nanamarika  ny ezaka manokana nanakanana ny fampiasana ny Tor ao Belarosia tamin'ny 30 Novambra sy 1 Desambra ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Tor, amin'ny vona Tor fantatra ary napetraky ny BelGIE ho ao amin'ny lisitra mainty manokana hosakanana, ny BelGIE dia Departemanta-panjakana mpanara-maso ny Fifandraisan-davitra ao amin'ny Repoblikan'i Belarosia.
Noforonina tamin'ny alàlan'ny rindram-panafihana TCP  ireo fanakanana, izay ahitana ny mpanafika milaza amin'ny mpiseran'ny milina fa nofafana ny fifandraisany amin'ny milina hafa izany hoe ny tambajotra Tor ho any daholobe. Nahatonga ny milina voalohany hitsahatra avy hatrany amin'ny fampiasana ny fifandraisana izany.
Kanefa hitan'ireo mpisera Tor Belarosiana izany fa somary mora anivahana ihany. Nahita ny 42.TUT.BY  fa afaka miditra amin'ny tranonkala voafetra ihany izy ireo amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fitety [browser] Tor vonona voalohany tamin'ny 5 Desambra . Namoaka torolalana  amin'ny fandingànana  ny fanakanana ny tranonkala hafa, ary matetika mampiasa ny “tetezana fiampitana ” ao amin'ny fitety izy ireo. Mety ho saro-pantarin'ny manampahefana Belarosiana ny fanakanana ireo fiampitana tsy voalisitra ao amin'ny lohamilina fototra ireo.
Nandritra izany fotoana izany, nilatsaka  ho 3.000 ny isan'ny mpisera Tor mivantana ao Belarosia raha 5.500 izany teo aloha. Na izany aza, nitombo  250 ka hatramin'ny 2000 ny isan'ny mpisera mampiasa ny tetezana fiampitana izay mampiseho fa mandingana ny fanakanana ny ankamaroan'ny Belarosiana mpisera Tor.
Nanomboka nijery ny fomba hafa mitovy amin'izany  i Rosia rehefa nihetsika voalohany tamin'ny fametrahana ny lalàna fanakanana ny Tor i Belarosia tamin'ny taona 2015. Raha nandamoka  ny ezaka lehibe nataon'i Rosia tamin'ny fanakanana ny Tor, noho ny fisitahan'ny nanao fifanarahana tamin'ny tetikasa  no antony voalohany indrindra, dia ho hita eo raha hanaraka ny ohatr'i Belarosia i Kremlin na hianatra avy amin'ny tsy fahombiazany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/12/17/93513/
 fanambarana ofisialy: http://www.belta.by/society/view/minsvjazi-o-blokirovke-tor-ogranichivaetsja-ne-anonimnyj-dostup-v-internet-a-poseschenie-zapreschennyh-222459-2016/
 tambajotra Tor: https://www.torproject.org/index.html.en
 nametraka ny fototry ny fandraràna an'ireo tolotra tsy mitonona anarana: https://globalvoices.org/2015/02/25/belarus-bans-tor-and-other-anonymizers/
 rindram-panafihana TCP: https://blogs.technet.microsoft.com/networking/2009/08/12/where-do-resets-come-from-no-the-stork-does-not-bring-them/
 tetezana fiampitana: https://www.torproject.org/docs/bridges
 fomba hafa mitovy amin'izany: http://www.rbc.ru/technology_and_media/05/02/2015/54d393ff9a7947829933db57
 fisitahan'ny nanao fifanarahana tamin'ny tetikasa: http://www.kommersant.ru/doc/2805960